Amapulatifomu we-GIS wamahhala, kungani angathandwa? - I-Geofumadas
Disemba, 2007 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, I-GvSIG, GIS ezininginingi
Ngishiya isikhala esivulwe ukucabanga; isikhala sokufunda amabhulogi sifushane, ngakho-ke ngiyaqaphela, kuzodingeka sibe lula ngokulula.
Lapho sikhuluma nge «Amathuluzi we-GIS wamahhala«, Kuvela amaqembu amabili amasosha: inqwaba ebuza lo mbuzo
... futhi yiziphi lezo?
... futhi kukhona abasebenzisi babo?
Ngenkathi iyingcosana itholakala ngakolunye uhlangothi lwesiteji, ngezimpendulo ezifana:
... Ngenza okuningi ngaphandle kokuchitha imali
Nazi ezinye izizathu zokuthi kungani amapulatifomu wamahhala engekho ngendlela yabasebenzisi abaningi be-GIS.
I-1 Ijika lokufunda
Endabeni GRASS, ukunikeza isibonelo, leli thuluzi lisebenza ne-Linux ne-Windows, enakho API ku-C kahle okubhalwe phansi, onakho izifundo kuqedile, ngemuva kokuyihlola siyakuqinisekisa ukuthi iyayenza imisebenzi ye-ARCGis, nezinye izandiso zayo eziningi ezibiza izinkulungwane zamaRandi.
... kodwa ubani onika inkambo ye-GRASS ezweni eliseLatin America?
Angikhulumi ngokuqeqeshwa kwabathuthukisi, bafunda bodwa, ngaphandle kwabasebenza ngokujwayelekile kokuhlaziywa kwendawo, ukucutshungulwa kwezithombe, ukuguqulwa kwedatha ye-raster ibe yi-vector ... lezo zinto i-GRASS ezenza kahle kakhulu. Impela ukufaka ukuqeqeshwa kwe-GRASS kufanele kube lula kakhulu, cishe ngamahora we-24, kepha umbuthano onesihluku wokuthi kunesidingo esincane kakhulu salezi zifundo kusho ukuthi izinkampani ezinikezelwe ekuqeqeshweni azihleeli izingqungquthela mayelana nale ndaba. Masingasho ngezinye izinhlelo zamahhala noma zamahhala njenge-gvSIG, Spring, I-Saga noma i-Jump engaziwa kakhulu.
Ngakho iqiniso lokuthi ijika lokufunda lisakazeke kakhulu lenza abasebenzisi bebize ... ngendlela efanayo neLuxux mahhala, kodwa isevisi esebenzisekayo e-RedHat ibiza imali eningi.
I-2. Kulula ukuphazamisa kunokufunda
Kucace bha ukuthi i-ESRI ne-AutoDesk bayathandwa ngoba ubunqunu bubolekise isandla ... noma ihhuku. Yize amathuluzi aqine kakhulu, ahlukahlukene futhi ngokungangabazeki esekelwa kakhulu yinkampani edumile, inkampani encane noma encane enikezelwe endaweni ye-cartographic kufanele ifake imali okungenani engu- $ 48,000 amadola emikhiqizweni ye-ESRI ukuqala nje umnyango wokuthuthukisa wabasebenzisi be5 ( I-ArcGIS, i-ARCsde, Isihleli se-ARC, i-ARC IMS ... ngaphandle kwe-GIS Server). Ngakho amapulatifomu omthombo ovulekile ayindawo enhle yezinkampani ezinikezelwe ekuthuthukiseni, kepha opharetha abajwayelekile abazosebenzisa ideskithophu kuphela ... bazofaka i-patch emehlweni, futhi basebenzise i- $ 1,500 online :).
I-3. Kungcono ukuya nomuntu othandwa kakhulu kunezingcono kakhulu.
Sibona leli siko ngisho noma kukhulunywa ngokusebenzisa imali, umsebenzisi uyazi ukuthi iMac ingcono kune-PC, ukuthi iLinux ingcono kuneWindows, ukuthi amanye amathuluzi e-CAD angcono kune-AutoCAD; ukuze lezi zingxenyekazi ezincintisana noDavid noGoliyati zihlale ezandleni "zabasebenzisi abakhethiwe" abakhokha amanani afanayo.
Ngenkathi ngise mncintiswaneni phakathi kwe- "cishe mahhala" ne "eqolo", udonga luba olukhulu kakhulu kunangaphambili uthathwe ngu-gentile, ngokusebenzisa iManifold ... yize kungemahhala. Ngakho-ke, sisebenzisa amathuluzi abiza u- $ 4,000 ukuze nje asigcine i-Geek, yize iningi labasebenzisi lingasebenzisi ilayisense, kepha izinkampani.
... ekuphetheni, sibona ukuthi kungobubi obudingekayo ukuthi kunezinkampani ezinkulu, zikhokhisa izinkulungwane zamaRandi ilayisense ukuze ukufunwa kwalobu buchwepheshe kuqhubeke. Futhi kuzoqhubeka kungobunye ububi obudingekayo, ukuthi iqembu liqhubeke nokulwa kusuka ohlangothini lomthombo ovulekile, yize iningi lizobabheka njengamaNerds.
Autodesk Blog ESRI utshani I-GvSIG OS GIS ezininginingi
Thumela Previous«Langaphambilini Yini entsha i-AutoCAD 2008?
Post Next Ukuqhathanisa phakathi kwamaseva wemephu (IMS)Olandelayo "
Izimpendulo ze-5 "kuma-platforms wamahhala we-GIS, kungani angathandwa?"
Ukuphendula umbuzo bangibuza ngeposi:
I-GIS egijima ku-Apple:
-QGIS. Le yakhiwe ku-C ++
-gvSIG. Yakhelwe kuJava, okuthile okukhawulelwe ku-Mac ngoba isebenza njengenguqulo ephathekayo. Ukusetshenziswa kwayo okuhle ku-Linux naku-Windows
Yeqa Eqa. KuJava, kepha ngaphambi kwale gvSIG iyathandeka
Okunye okukhethwa kukho kusebenza kuma-Paralells, okubangela ukuthi izinhlelo zokusebenza ze-Windows zisebenze ku-Mac.
Hlanganisa i-gvSIG no-SEXTANTE, kulabo abangesabi iJava
Hlanganisa i-qGIS ne-GRASS, kulabo abakhetha i-C ++
ImephuServer noma i-MapGuide ngaphezu kwe-C ++
Disemba, i-2010 ku
Kulungile Jc. Lokhu okuthunyelwe kuvela ku-2007, okwamanje sibonile ukuvela kwemodeli evulekile, futhi sonke silindele ukuthi imiphumela yayo yokugcina isimeme.
Ngicabanga ukuthi kuyinkinga yesikhathi sokuvula isofthiwe yomthombo ovulekile, okudingekayo ukuthi kukhona umphakathi owenzayo.
Endabeni ye-gvSIG, lo mphakathi usebenza kakhulu futhi ukhula ngejubane elikhulu, ngezifundo eziningi zokuqeqeshwa ezindaweni eziningi nokusekela kwezobuchwepheshe. Kuyiqiniso ukuthi ngolwazi oluningi uhlelo luyehla futhi mhlawumbe i-ArcGIS noma enye isofthiwe yokuthengisa ikulungele kangcono futhi isebenza kangcono kakhulu. Kodwa umbuzo wukuthi ukuhlela kanjani idatha, okungukuthi ukuqaliswa kwe-GIS emiphakathini yomphakathi nezinkampani kuyanda, futhi ukuthambekela kumkhiqizi ngamunye wolwazi ukuchaza ulwazi lwayo kwizinhlelo zalo, bese uyifaka ejwayelekile emitholampilo yedatha, ngokuhambisana namazinga (i-WMS, i-WFS, njll) lapho esikhundleni sokugxilisa idatha, zihlukaniswa ngamaseva abelana ngolwazi, kanye nomsebenzi womsebenzi, isofthiwe yomthombo ovulekile, njenge-gvSIG, ebhalwe kuJava, uma kuyasiza.
Ngiyethemba futhi ngiyibheja ku-software evulekile yomthombo, ngoba kwezinye izinhlobo zezinkambu, ithatha umhlaba kusuka kwisofthiwe yokuthengisa, (uhlaka olufana ne-Drupal, i-CMS WordPress, i-elgg, njll.)
Ikusasa likhona ekuxhumaneni nasekuhlanganisweni kwayo yonke isofthiwe yomthombo ovulekile, ekugcineni uRichard Stallman uzoba khona.
Disemba, i-2007 ku
Iphuzu, i-SPRING ikhululekile, ayikho mahhala.